Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhiiraday in uu runta u sheego farmaajo,Madaxwayne farmaajo Wuxuu wada baqdin galin iyo Car Juuq Dheh, Labdii Gole Way qayliyeen, Xisbiyadii Cabudhin ayaay Tirsanayaan Nabdgalyadii farhay Kasii baxysaa, Maamul Gobaleedyadii Siduu Ula Dhaqmayo waad Aragtaa, Markaa maxaa Uyaala wuxuu ku socdaa dariiqii ……………………. | Biyoguurenews.com
Home Wararka Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhiiraday in uu runta u sheego farmaajo,Madaxwayne...
Xasan Sheekh Maxamuud oo ku dhiiraday in uu runta u sheego farmaajo,Madaxwayne farmaajo Wuxuu wada baqdin galin iyo Car Juuq Dheh, Labdii Gole Way qayliyeen, Xisbiyadii Cabudhin ayaay Tirsanayaan Nabdgalyadii farhay Kasii baxysaa, Maamul Gobaleedyadii Siduu Ula Dhaqmayo waad Aragtaa, Markaa maxaa Uyaala wuxuu ku socdaa dariiqii …………………….
Madaxweynihii hore ee Dalkaasi Soomaaliya Xildhibaan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku eedeeyay dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo inay wado cabudhin iyo cabsi gelin, isagoo ku baaqay in wax laga bedelo hab dhaqanka siyaasadda iyo sida ay hadda wax u socdaan.
“Haddii labada aqal ee sharci dejinta ay leeyihiin sidaan kuma wada shaqeyn karno, haddii dowlad goboleedyadii xubinta ka ah dowladda federaalka ay leeyihiin sidaan kulama shaqeyn karno dowladda dhexe, haddii xisbiyada qaarkood ay ka
cabanayaan in la caburinayo, lana baal marayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla, sow ma haboona in habdhaqanka siyaasadda iyo sida wax u socdaan wax laga bedelo”ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Waa eedeyntii u horeysay ee Xasan Sheekh uu meel fagaare ah ugu soo jeediyo dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo, tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay Muqdisho.
Previous articleBBC Madaxii shaqaalaha Pentagon-ka Kevin Sweeney oo iscasilay, haddaba maxaa looga kala cararayaa maamulka madaxweyne Donald Trump
Next articleDEG DEG, war cusub oo Kasoo Kordhay Murankii dhalasho ahaneed ee fanaanda Nimco yassin Caraale